DHAGEYSO: Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh ”Hoggaanka DF Somaliya sida ay wax ku wadaan sax maaha” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh ”Hoggaanka DF Somaliya sida ay wax...
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay jujuubkii Axaddii shalay lagu sameeyay Madaxweynihii hore ee Somaliya, Shariif Sheekh Axmed, xilli uu ku sii jeeday Magaalada Kismaayo.
Dowladda Somaliya ayaa is hortaag ku sameysay wafdi uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Axmed, oo doonaayay in Magaalada Kismaayo kaga qaybgalaan caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Xasan Sheekh Maxamuud oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in Maamulka Hawada Somaliya laga soo maray dadaal baaxad leh, sidii maamulkaasi dib loogu soo celin lahaa dalka.
Waxaa uu sheegay inaanay sax ahayn in Madaxdii hore ee dalka lagu dhibaateeyo, iyadoo loo adeegsanayo dano gaar ah, oo siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu intaa ku daray in ay dhibaato ka dhalan karto, haddii dowladda haataan jirta ay Maareynta Hawada u isticmaasho, sidii hub siyaasadeed oo kale, iyadoo ay culeys ku keeni karto xasiloonida iyo midnimada dalka.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa hoosta ka xariiqay inaanay sax ahayn sida ay wax ku wadaan Madaxda Dowladda Federaalka.
”Madaxdu markay shacabka Ixitiraamaan ayay ixtiraam helayaan. Hoggaanka dowladda sida ay wax ku wadaan sax maahan oo wadada ay hayaan qardheer bay ka tuureysaa oo dadku way idin dul qaateene dhibka ka dhaafa.” Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Somaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intaa ku daray ”Sidaa wax u wadaan anagaa dalka joognay oo og waxa ka dhashay, haddii aydaan ogayn ee ka joogga.”
Ugu dambeyn, Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa si adag kaga falceliyay tallaabadii ay dowladdu ku xanibtay diyaaraddii wafdiga Shariif Sheekh Axmed u qaadi laheyd Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
axmed September 25, 2019 At 13:55
Ma xishoodo miyaa? war chnes kaagii waad qaadatay, waxa tahay ninkii yiri , Hotela laguma shiri karo, Mucaarad ma arki karo, Dastuurkii oo aad diidey, Xildhibaana badan oo la laayy intii aad madaxda ahyd, waxaaba la raby in lagu maxkamadeyo danbiyadii lumis dhaqaale , dhul dowladeed boob, iyo ka daran, inaad hadasho ma eheyn.